Ar Baladkaan intow ka baxay?.Xamar dhumay!!!!! – Balcad.com Teyteyleey
Walaalayaaloooow, magaaladani inteey ka baxday? Ummaddaha kale waxaa ay dhowraan meelaha taariikhiga ah. Haddii magaaladu ciriiri noqoto, lama burburiyo qaybaha taariikhiga ah, ee meela kale ayaa la dhisaa. Qaybtii horena taariikh ahaan ayaa loo dhaafaa. Annaga aaween dhismooyinka ka muuqda 113 kan sawir oo ay lahaan jirtay Mogadishu.
Haddii Abkoow yaasheen dib loo soo celiyo waxa ay arki lahaayeen, magaalo kaduwan tii ay dhaxal ahaan nooga tageen,waxa ay dhihi lahaayeen naga celiya caasiyaashan taariikhdeenii dhumiyay.
Waxa ay ka tageen magaalo dhismayaasheedu ay lahaayeen albaabo waaweeyn ,waxa ay u imaan doonaan magaalo erdaheedo cariiri yihiin,iyo wadooyin xirxiran sida ka muuqata labada sawir ee ugu horeeysa, xatta dhirtii ay yaqiineen oo magaalada ay ku qurxiyeen waxaa bedelay geed yahood iyo geed Hindi.
Waxa aan jeclaan lahaa in dowlada hoose ay ugu yaraan hal qol oo sawirada taariikhiga ah lagu uruuriyo ay ka dhax furto xarunteeda . waxaa kale oo aan ugu hambalyeeynayaa maamulka gobalka banadir oo la sheegay in uu dayactirayo wixii ka haray goobihii taariikhiga ahaa, waxaan ka xumahay in la yiri Ex-baarlamaan ayaa la burburinayaa oo dowlad khaliijka ahi ay ka dhisee mid cusub.waa fool xumo iyo dambi weyn, waa halkii 1960 kii la saaray calankii somalida,haddii aan sideedii hore loo dayac tiri Karin, sideeda haloo daayo sii ay u muujiso in ay aheed halkii calnka la saaray iyo taariikhdii burburka labadaba.
A) Ka raali ahaada qoraalkan wixii aan ka khalday, ma ihi taariikh yaqaan iyo sawirada haray oo aanan halkan soo wada galin Karin,farsama la’aan.
B) Sawiradaan ah 113 sawir waxaan ugu deeqay Jiilka cusub.
C) Xor ayaad u tahay in sawiradan aad u isticmaasho qoraala kale.
D) Meeqa dhismo ayaad aqoonsan weyday?.
The post Ar Baladkaan intow ka baxay?.Xamar dhumay!!!!! appeared first on Ilwareed Online.